လှိုင်ကျော်ထွေး၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်phyuthi's ၏ 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိအသင်း (၁၇) ကြိမ်မြောက်အလှူပွဲ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ အတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း @@@@@@@@@@@' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး shared thein wai's blog post on Facebook
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်thein wai's ၏ 'ငါကိုယ်တိုင် သောတာပန် တည်ပြီလား။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်ဦးထွန်းလင်းဦးကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"လေးစားရပါသော ဓမ္မအဆွေတော်ခင်ဗျာ။ မိတ်ဆွေတင်ထားသော ဝိပဿနာဖြင့် မရဏကိုကျော်ခြင်း ဘလောသည် အစ အဆုံးအပြည့်အစုံပါမလာ၍ ပြည့်စုံအောင်ပြန်တင်ပေးဖို့ အသိပေးအပ်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့်………"
လှိုင်ကျော်ထွေး shared Thein Naing Ohn's blog post on Facebook
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်thein wai's ၏ 'ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး ကျခံရသူများ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး sharedaprofile on Facebook
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်thein wai's ၏ 'မိဘနဲ့ သားသမီး ချစ်ပုံချစ်နည်းသာကွာပါစေ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်thein wai's ၏ 'ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ၏ ဘ၀လှအောင်ပြင်ချင်စိတ်။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်thein wai's ၏ 'ဘုရားရှင်၏ ရာဟုလာအား သြ၀ါဒတော် (၁)။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်thein wai's ၏ 'ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အသိပညာပေးဆောင်ပုဒ်များ (၅) ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်Thein Naing Ohn's ၏ 'Vippassana or insight Meditation' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်thein wai's ၏ 'စူဠသောတာပန် ဖြစ်ရခြင်း၏ အကျိုးတရားများ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်thein wai's ၏ '**#ပျော်စရာအကောင်းဆုံးမိသားစုဘ၀ကိုရရှိအောင် ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နည်း။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကိုယ့်ကျိုး-သူ့ကျိုး၊ တိုင်းပြည်ကျိုးနှင့် အမျိုးဘာသာ သာသနာအကျိုး ပွားတိုးစေမှု လုပ်ကျွေးပြုမှ ဒို့ဘ၀ မုချ လှ-မည်မှတ် (ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
Red Ribbon From မေမွန်သန့် Red Ribbon From တစ်ပွင့်နန်း Red Ribbon From ကလေးတို.ဆရာမ
Started this discussion. Last reply by ကျော်ကို Dec 16, 2011. 12 Replies5Likes
Started this discussion. Last reply by လှိုင်ကျော်ထွေး Dec 8, 2011.6Replies2Likes
Started this discussion. Last reply by ကိုကျော်သန်း Aug 28, 2013. 18 Replies2Likes
သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ရကျိုးနပ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်အောင်
Started this discussion. Last reply by သက်ထွန်း Sep 25, 2014. 38 Replies6Likes
Started this discussion. Last reply by လှိုင်ကျော်ထွေး Jun 2, 2011.4Replies 1 Like
Started this discussion. Last reply by 2ynh08yea9vjm Feb 7, 2012.4Replies0Likes
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 6, 2015 တွင်8:19pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 10 Comments5Likes
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 31, 2015 တွင်6:50pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 31, 2015 တွင်5:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments4Likes
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 24, 2015 တွင်5:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment4Likes
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 11, 2015 တွင်2:55pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 44 Comments4Likes
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 4, 2015 တွင်4:49pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments5Likes
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 3, 2015 တွင်3:09pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 64 Comments5Likes
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 28, 2015 တွင်7:18pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment3Likes
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 14, 2015 တွင်6:59pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 126 Comments 14 Likes
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 20, 2015 တွင်9:13am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။9Comments 8 Likes
11:47am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 17, 2015, တွင် tin aung bo မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အလှူငွေလက္ခံရရှိကြောင်း သတင်းကောင်းကို လက္ခံရရှိပါသည်။ ချက်ဘောက်မှ ချက်ချင်း အကြောင်းပြန်ရန် ရှာမတွေ့၍ ယခုမှ အကြောင်းပြန်ရပါသည်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ ဆိုဒ်ကြီး ထာဝရ ရှင်သန်ကြီးပွားပြီး အကျိုးဆောင်များ ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာအကျိုး ဆထက်တိုး ရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း ပို့သအပ်ပါသည်။ ယခုလို လှူဒါန်းခွင့် ရအောင် ကျိုးစားဆောင်ရွက်ပေးကြပါကုန်သော အဖွဲ့ဝင် အကျိုးဆောင်များအားလုံးကို ကျေးဇူးဥပကာရ အထူးတင်ရှိပါကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားအပ်ပါသည်။
8:37pm အချိန်သြဂုတ် 19, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:22pm အချိန်မေ 12, 2015, တွင် ကလေးတို.ဆရာမ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဦးကျော် နက်ဖြန်ညနေ အိတ်ဆဲယ်တာဝါ ဟိုတယ် မှာ လာယူပါနော်-
ကြာသာပတေးနေ. ဘန်ကောက် ကို ပြန်ပါမယ်
10:20am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 14, 2014, တွင် uindobhasa မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:26am အချိန်အောက်တိုဘာ 13, 2014, တွင် maythu မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:28pm အချိန်စက်တင်ဘာ 10, 2014, တွင် Aung Myint Myat မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:13pm အချိန်စက်တင်ဘာ 8, 2014, တွင် Aung Myint Myat မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:42am အချိန်စက်တင်ဘာ 5, 2014, တွင် bobowin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါ အကို ကျွန်တော်မိလိန္ဒမင်းကြီးနှင့်အရှင်နာဂသိန်အမေးအဖြေစားအုပ်ဖတ်ချင်လို့ပါ ကူညီပါလားဖုန်းနဲ့ဖတ်လို့ရမယ်ဆို
5:07pm အချိန်သြဂုတ် 19, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့မှစလို့ လိုချင်သောပန်းတိုင်ကို အရောက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
5:47pm အချိန်ဇွန် 30, 2014, တွင် မဇာခြည် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။